PSJTV | दु:ख नबाँड्ने गीतकार
आइतबार, २१ असोज २०७५ पिएसजे टिभी
"मसंग इच्छाहरुको त्यति ठूलो चाङ छैन। कसैले सोधे भनिदिन्छु- मृत्युपश्चात मेरा अौंलाहरुबाट एउटा लाहुरे फूल उम्रियोस् अनि त्यो फूलबाट एउटा मिठो गीत जन्मियोस्। मैले लाहुरे फूल हेरेर धेरै गीत लेखेको छु।"
रगतरगतमा क्रियाशीलता र संगीत बोकेका अगम गुरुङ नेपालीभाषी भुटानी हुन्। सन् १९९२ मा तत्कालिन भुटानी शासकको बर्बरता छल्न नेपालको शरण परेका हुन्। गजबको कुरा के छभने, भुटानबाट नेपाल छिर्दासमेत उनी गीत गुनगुनाउँदै छिरेका थिए। तर विडम्बना, गीत बिछोडको थियो, वियोगको थियो!
इच्छाहरुको चाङ नभएपनि उनका पुराना पीडा र कुण्ठाहरुका छाललेभने उनलाई कहींकतै वेगले हान्छ। हँसिलो स्वभावका उनी भरसक पीडा र कुण्ठा बाँड्दैनन्।
उनी भन्छन्, "पीडा र कुण्ठा त सबैसंग हुन्छ। दुनियाँमा अभाव छ त केवल हाँसोको। त्यही भएर सकेसम्म हाँसो बाँड्न खोज्छु।"
तर पीडा र कुण्ठा अनुहारबाट जति छिपाएपनि उनको शब्दमा भने स्पष्टसंग पाइन्छ। उनी लेख्छन्,
'वर्ष र दिनमा आउने, दशैं र तिहार
आफू त परदेशी खाली भो निधार।'
अाफ्नो देशनै परदेश बन्नुको पीडा छ उनमा। आफ्नो साइनोसम्बन्धीसंग च्यातिएर बाँच्नुको दु:ख छ उनमा। पुर्खाहरुको पाइला पछ्याउँदै अाउने होभने लालुपाते फुल्ने कुनै नेपाली घुर्यानमा पुग्छन् उनी। हो, शरीरभरी चन्द्रसूर्यको दस्तखत भएपनि चिच्याएर 'नेपाली हुँ' भन्न नपाउनुको कुण्ठा छ उनमा। तर उनी हरेक कुरामा सकारात्मकता खोज्छन् किनकि खुशी जो बाँड्नु छ।
उनी भन्छन्, "पीडा र कुण्ठाको भारी बोक्न पाउनु पवित्र अवसर हो मेरो लागि। अलिकति कला अनि अलि बेसी पीडा र कुण्ठाले मलाई गीतकार बनायो।"
अध्यात्मवादले 'विगतका सम्झनाहरुमा पीडामात्र छ' भन्छ। तर उनमा विकल्प छैन। उनमा सम्झनैसम्झनामात्र छन्। कहिले भुटानको मलामी डाँडामा प्रेमिकासंग संगै बसेर चिउरा खाएको सम्झना त कहिले नेपालमा साइँलामाइलाहरुसंगै मारुनीगीत गाएको सम्झना।
उनी भन्छन्, "यो विदेशी भूमिमा त ज्यानमात्र छ।"
हुनपनि हो, सम्झिरहने मनको पखेटालाई न सातसमुद्रले छेक्नसक्छ, न अग्ला पहाडहरुले। हुन त, भुटानमै अल्झिएका अाफन्तहरु जसलाई 'गएँ है'पनि भन्न पाएनन्, उनीहरुलाई भेट्ने भनेको त मनले न हो।
उनी थप्छन्, "हजार दु:खद यादहरुको माया लागेर आउँछ। यसैलाईनै त गीत बनाउँछु म।"
उनी विगत सम्झिएर कोर्छन्,
मायालुलाई सरभाङमा भेटें नि
के मरी लानुछ जीन्दगानीमा...'
“तपाईंकालागि गीतसंगीत के हो?"
दर्जनौं गीतका गीतकार अगम एकछिन घोरिएर भन्छन्, "मसंग ठेट परिभाषा केहीको छैन। परिभाषा सापेक्षित हुन्छन्। संगीत मेरो लागि आवश्यकता हो। म योबिना बाँच्न सक्दिनँ। बस्, अहिलेलाई यति भन्छु।"
"तपाई संगीतपनि भर्नुहुन्छ?"
यस प्रश्नको जवाफमा उनी भन्छन्, "मेरो शब्द र संगीत दुवै रहेको जिन्दगानी फूल जस्तै हो नामको मारुनीगीत गत हप्तामात्र सार्वजनिक भएको छ।"
"अाजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?"
फिस्स हाँस्दै अलि घुमाउरो उत्तर दिन्छन, "म प्राय खेल्नमा व्यस्त हुन्छु। कहिले गीतसंगीतसंग त कहिले आफ्नै मनसंग खेल्नमा। विदेशमा आफ्नो दैनिकी त छँदैछ।"
उनी प्राय: केही न केही कोरिरहने बताउँछन्। उनी नेपाली डायस्पोराका केहि संघसंस्थामा क्रियाशील रहेर नेपाली कलासंस्कृतिको जगेर्ना र उत्थानमा लागिपरेको पनि बताउँछन्।
"त्यसोभए समाजसेवापनि गर्नुहुन्छ?"
मान्छेले पिएचडिनै गरेपनि जिन्दगी पढ्न चुकियोभने अध्ययन अपुरो हुने ठहर छ उनको।
उनी भन्छन्, "अक्षर कम पढेको छु तर जिन्दगीलाई पल्टाइपल्टाइ हेरेको छु। मैले दुःखलाई हत्केलामा राखेर हेरेको छु। जिन्दगी पढ्दा पाएको ज्ञानले समाजसेवा गर्न उत्प्रेरित गर्छ। अर्को कुरा, गीत बनाएर युट्युबमा राख्नुपनि समाजसेवा होजस्तो लाग्छ। युट्युब लगायतका सामाजिकसंजाल यो युगको मन बिसाउने चौतारी बनेका छन्।"
यति कुराकानीपछि उही 'दु:ख नबाँड्ने गीतकार'को उत्तरोत्तर कामनाकासाथ हामी छुट्टिन्छौं।
(कवि अनिल नेम्बाङले नेपालीभाषी भुटानी गीतकार अगम गुरुङसंग गरेको कुराकानीमा आधारित)